Biography nke Giordano Bruno. Mụọ maka nchoputa ha na akụkọ ihe mere eme | Netwọk Mgbasa Ozi
N’oge ochie, e nwere ndị ekweghị n’evolushọn ma ọ bụ nchọpụta ihe ụfọdụ. Gbanwe ihe dịbu adị na nke ekwere na ọ bụ eziokwu enweghị ike ịgbanwe n'otu ntabi anya n'ihi na onye ọhụụ kwuru na ọ bụ otu a. Nke a bụ ihe mere Giordano Bruno maka imegide ọnụ ọgụgụ mmadụ banyere eziokwu ahụ bụ na ụwa abụghị etiti nke Eluigwe na Ala.
N'isiokwu a, anyị ga-akọwa ihe mere Giordano Bruno na uru ọ bara.
1 Ọnye na-bụ Giordano Bruno?
2 Nsogbu na ndu
3 Ihe omuma banyere oge ya
4 Ọgwụgwụ nke Giordano Bruno
Ọnye na-bụ Giordano Bruno?
Ọ bụ banyere nwoke tinyere ndụ ya niile na nkà ihe ọmụma na nkà mmụta okpukpe. O nwere ezigbo okpukperechi ma na-edekwa uri na ejije. Amuru ya na 1548 na Nola Napoles. A mara ya ikpe ọnwụ site na Nnyocha Nsọ n'ihi na ọ mere mkpughe megide chọọchị ahụ, na-ekwupụta na waswa abụghị etiti nke Eluigwe na Ala.
Dị ka anyị maara taa, ụwa anyị bụ nke Usoro anyanwụ, mejuputara mbara ala ozo nke nwere uzo ato ha gburugburu Sun. Na 1548 enweghị ụdị teknụzụ dị iche iche iji mara ọkwa anyị na Eluigwe na Ala. Dị ka ụmụ mmadụ na-adị mgbe niile, ha emehiela maka iche naanị maka onwe ha, ma, na nke a, anyị kwenyere na anyị bụ etiti nke ihe niile. A mara Giordano Bruno ikpe ọnwụ na, ụbọchị ole na ole gara aga, Pope Clement VIII nyere ya ohere ịhapụ echiche ya ma chegharịa.
Akụkọ a na-egosi na Bruno ajụghị nkwenkwe ya ọbụna site n'ọkụ n'elu osisi. O kwenyesiri ike n'echiche ya ruo ọgwụgwụ. Ugbu a enwere ike ikwubi na mmadụ, onye nchọpụta ya merela agadi maka oge ya, mmadụ ịchọ naanị ọdịmma onwe ya na chọọchị gburu ya n'ụzọ obi ọjọọ.
Nsogbu ya amaliteworị mgbe o nwere obi ike ịgụ ihe odide ndị a machibidoro iwu nke onye Netherlands bụ́ ọkà ihe ọmụma bụ́ Desiderius Erasmus nke Rotterdam. Nke a mere n'afọ 1575 na, site n'oge ahụ, etinyebara Bruno anya. Nke a bụ nanị mmalite nke nsogbu ya. Nkwenkwe ya site na nwata bụ ihe iyi egwu nye ụka, ebe o nwere ụzọ nke ya isi ghọta theology. Ndị otu okpukperechi kariri ahụ erughị ala mgbe ha nụrụ ihe ndị Bruno kwuru banyere Earth n'agbanyeghị na ọ bụkwa onye okpukpe.
Nsogbu na ndu
Nyere nkwenkwe ya dịgasị iche iche maka ọgbọ ya (nke mechara chọpụta na ọ bụ eziokwu), Ekwuru na Giordano anabatabeghị ndị okpukpe. E chiri ya ụkọchukwu ma bo ya ebubo na ọ jụrụ okwukwe. Maka nke a, ọ ga-ahapụ Iwu ahụ ma chụpụ ya. Mgbe e mesịrị, ọ ghọrọ onye okpukpe Calvin, ọ bụ ezie na echiche nkatọ ya dugara ya nga ngwa ngwa.
Ọbụghị naanị na Njụta Oku kpagburu Bruno maka inwe ezigbo echiche ma ọ bụ nkwenye ndị na-ekwenyeghị n'okpukpe, mana ndị ọgụgụ isi dị iche iche bụ ndị otu ahụ gbalịrị ikwusa okwu Chineke ma weta udo n'ụwa.
Kemgbe ndụ ya, naanị ọ nwere obi ụtọ n'ezie ma jisie ike nwee udo n'oge afọ ọ nọ na London, Paris na Oxford. Naanị na ọ bụ ya nwere ike ịzụlite nkà ya nke ọma, bụrụ onye ama ama dị ka onye edemede nke ọrụ okpukpe dị iche iche.
Ọ malitekwara ịme ka ụfọdụ echiche ya banyere sayensị na heliocentric tiori nke Nicolás Copernicus na Mbara Igwe. Echiche ndị a nọkwa na egwu na-aga n'ihu site na Njụta Oku ma Galileo Galilei kwadoro ya.
Ihe omuma banyere oge ya
Onwerekwa ndị mmadụ togoro etogo maka oge ha biri. Otu prọfesọ si Ngalaba Nkà Mmụta Nkịtị nke Mahadum Steeti Sao Paulo (UNESP) aha ya bụ Rodolfo Langhi mesiri obi ike na Bruno mara ma kwado eziokwu ahụ na Anyanwụ bụ etiti nke Eluigwe na Ala. Ihe ọzọ bụ na o mepụtara ọtụtụ ihe mmụta dị iche iche dabere n’ihe ọ mụtara. O kwusiri ike na Eluigwe na Ala enweghi oke ma na o nweghi otu etiti ka anyị siri mara ya. Nke ahụ bụ, e nwere ọtụtụ ụwa mmadụ bi karịa dịka thatwa yana na otu ọ bụla nke mbara ala gbara gburugburu etiti ya.
Bruno echeworị na afọ 1575 na Eluigwe na Ala enwere ọtụtụ mbara ala ndị ọzọ dịka aswa na ọtụtụ nnukwu kpakpando ndị ọzọ dịka Sun. Ọ kwenyere na e nwere ọtụtụ mbara ala karịrị. Saturn agbagharị na Sun. Mgbe e mesịrị, mgbe nchọpụta nke Uranus, Neptune y Pluto na 1871m 1846 na 1930, dika, e gosipụtara na ọ bụghị ihe ọjọọ.
Nsogbu Bruno nwere na ọha mmadụ bụ na ọ dabereghị na nkwenkwe ya na data sayensị na ihe akaebe. N'ụzọ megidere nke ahụ, ọ na-eche echiche banyere nkwenkwe okpukpe na nke ahụ bụ ihe na-enye ya nsogbu na-arịwanye elu ruo mgbe ọ nọ na elebanye anya na Njụta Oku. Mgbe e boro ya ebubo na ọ jụrụ okwukwe, ọ ga-ahapụ Paris na 1586. O dere ọtụtụ edemede na nke ọ kparịrị ndị isi ụka na ndị otu ya naanị iji kwado echiche ya.
Mgbe ọ hapụsịrị Paris, ọ gara Germany ebe ọ gbaba na Lutheranism. Ha chụpụrụ ya n’ebe ahụ ka oge na-aga.
Ọgwụgwụ nke Giordano Bruno
Njehie kachasị njọ nke ndụ ya n'enweghị obi abụọ ọ bụla bụ ịlaghachi Italytali mgbe afọ 15 hapụsịrị. Ma ọ bụ na ọ raara ya nye site n'aka Giovanni Mocenigo dị mma onye, ​​n'okpuru ngọpụ na Bruno bụ onye nkuzi ya, Ọ kpọrọ ya ka ọ bịa n'ụlọ ya ma ọ bụ ebe ọ nyefere ya n'aka Nnyocha Nnyocha nke Venetian.
Mgbe o nwetere ule yiri ya, ọ hapụrụ npako na mpako ọ nweburu maka afọ ndị a niile ma mesoo ndị juri ahụ ọfụma. Agbanyeghị, ọ bụ oge gafere iji laghachi usoro ole na ole. Ubiere oro ekedi nte ke ẹma ẹfọp enye ke eferife ke iso Akwaifiọk. Ọ bụ ezie na o kwuru na ya na-ekwusa Ha abughi okpukpere chi, ma obu ihe omuma, o nwu n’elu osisi, gbara ozu ya n’afo 1600.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ndị ụka na-egbu ezi ndị na-akụzi eziokwu n'eziokwu n'akụkọ ihe mere eme. Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ndụ Giordano Bruno.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Giordano Bruno
Igwe ojii Lenticular